TORITENYPosté par Ra-Hiandry ven., mars 30, 2012 00:19:33
ALAHADY KAREMY-5-10, TAONA B
- Ny voninahitr’Andriamanitra dia ny mandresy ny ratsy.
“Ankehitriny ny mpanapaka an’izao tontolo izao no horoahina.”
Tsy iza akory io mpanapaka an’izao tontolo izao io, fa ny devoly sy satàna. Ny fomba mahomby handresena azy tokoa dia tsy inona fa ny fikatsahana mandrakariva sy ambonin’ny zavatra rehetra ny voninahitr’Andriamanitra irery ihany.
Tadidintsika ny fakampanahy fahatelo nataon’ny demony tamin’i Jesoa tany an’efitra: nasehon’ny demony Azy ny voninahitr’izao tontolo izao sy ny fanjakany, ka hoy ilay io taminy hoe raha miankohoka amiko ianao, dia homeko anao izao rehetra izao.... Mazava sy hentitra ny valintenin’i Jesoa hoe: “Mialà ry Satàna, ny Tompo Andriamanitrao ihany no hotompoinao.”
Tsy izany mangorona sy manangona lava ho an'ny tena izany àry no fahamasinana, fa ny manome sy mizarazara izay ananana, eny hatramin'ny aina aza....
=> Ny fikatsahana ny voninahitr’Andriamanitra àry dia safidy tsy maintsy ataontsika ao amin’ny zavatra rehetra ataontsika eo amin’ny andavanandrom-piainana. Eny hatramin’ny antsipiriany indrindra. Satria tsy kely lalana ny ratsy, ka na dia izay asa miharihary fa tsara, toy ny fivavahana aza, rehefa tsy voatandrina dia lasa tsy fanomezamboninahitra an’Andriamanitra, fa lasa fitadiavana voninahi-tena, toy ilay farisianina nivavaka tao an-tempoly, ka sady misaotra an’Andriamanitra no nanaratsy ilay poblikana namany.